Obboo Hayilamaariyam Gammadaa, abbaasaa Obboo Gammadaa Masqalee fi haadha isaa Aaddee Ka’ade Addaamuu irraa, bara 1907 Godina Shawaa Kaabaa aanaa Jiddaa ganda Bogonjo jedhamuutti dhalate. Umuriin isaa akkuma barnootaaf gaheenis gara magaalaa Finfinnee geeffamuun, mana barnootaa Dagimaawi Minilik seenee barnoota akka jalqabu taasifame.Haa ta’uyyuu malee yeroo sanatti Xaaliyaaniin biyya waan weerarteef, barnoota isaa gidduutti kutuun hiriyoota isaa waliin falmii weerartuu xaaliyanii waliin taasifamaa turekeessatti qooda fudhachuu jalqabe.
Muudamni kunis maalif akka ta’e, Obbo Haayilamariyaamiif galuufif yeroo itti hin fudhanne ture. Yeroo gabaabaaf erga hojjateen booda fedha isaan hojicha gad lakkisee ba’uun yeroo isaa guutummatti ijaarsaWaldaa Maccaafi Tuulamaa irratti dabarsuu jalqabe. Haa ta’uyyuu malee yaada isaa kan bakkaan ga’uuf hin milkoofne.Hojii isaa gad lakkisee yeroo muraasa booda hidhattoota mootummichaan mana fuudhamee man hidhaatti darbatame. Qabeenya isaas maqaa Idea baankiin horii hin taanetti gurguruun mormitootni isaa akka qircatan taasisanii, maatii fi qeeyee isaa dirree gubbaatti rakkinaaf gad lakkisan. Mana hidhaa sana keessattis dararama qaamaafi qalbiin irra ga’aa tureen erga dadhabeen booda manatti galee haa du’u jechuun yeroo lubbuun isaa ba’u geessu manatti galchan. Mana ga’ees bultii muraasaa qofa erga tureen booda darbe.